Luz de Maria -Uhlala ngaphakathi kwe-Countdown-Countdown to the Kingdom
Inenekazi lethu ukuze NguLuz de Maria de Bonilla nge-11 kaJulayi 2020:
Bantwana abathandekayo beNtliziyo yam eNgenakuguquka: Abantwana bam babetha entliziyweni yam. Ndiyabaxabisa kwaye andifuni ukuba baguquke kuNyana wam. Esi sizukulwana siphila ngamaxesha anzima awazizisela sona ngokusebenza nangokusebenza ngaphandle kweNtando kaThixo. Uyilo lobuthixo luyazalisekiswa ngenxa yemiphefumlo elungileyo (cf. ngu-45: 18), ngaphandle kokulibala ukuba umthandazo owenziwe ngentlonelo kwaye ngentliziyo ethobekileyo uhlala uviwa (cf. Mt 7: 7-8, Mt 21: 21-22), kwaye ngulo mthandazo oya kuthi uphumelele ekuthomalaliseni amandla esi sizukulwana sihlangabezana naso kwaye siza kusifumana ngummiselo kaThixo.
Bantwana bam, ndibona ukuba amazwi amaninzi aphindaphindwa amagama ngelixa iingqondo zabo zisekude kula magama abanenjongo yokuthandaza. Kungxamisekile ukuba uthandaze ngentliziyo yakho, amandla kunye neengqondo zakho. Andifuni ukuba utyhafise ngeli xesha; qhubeka phantsi kokhuseleko loNyana wam -Uhlala ngaphakathi kokubala ukuya kudibana kwakho noko ndikuprofetele uluntu.
Guquka ngalo lonke ixesha lobomi bakho --guquka kwaye wenze izilungiso kwizono zakho! Kubalulekile ukuba uhlale ngoxolo unikezwe ukusondela kwesilumkiso, apho uyakufumanisa ukuba uzivandlisisa ngaphakathi, ngaphandle kwesono esinye, ityala elinye eliye lavuma ukuba lidlule ngaphandle kokuvavanywa. Kwabanye kuya kuba njengokuphefumla nje; Kwabanye intuthumbo yokwenyani apho baya kuvakalelwa kukuba abanakuphuma kuyo; Abanye baya kuba lidlelane labo noNyana wam oyintanda, eguqukayo kwizono zabo. Abanye ke, xa bebona ububi ababephila ngabo, abuyi kunyanyezelwa, kwaye baya kuva ukuba bayasweleka bengafanga, kuba ngenxa yoko baya kuvukela abantu bo Nyana wam kunye neqela lobubi.
Esi senzo senceba kaThixo yemiphefumlo masingaze ngaphandle kokuzihlola ngokwakho okuphindaphindiweyo, bantwana bentliziyo yam engaqhelekanga. Sukuyekisa: zivume izono ezenziwe kwaye ungoni kwakhona. ICawe yoNyana wam ingqongwe bububi, obuzisa iyantlukwano kuyo yonke indawo, isasaza ityhefu yenyoka yakudala (cf. II Kor 11: 3) ngaphakathi kweCawa yoNyana wam ukuze imiphefumlo ilahleke.
Kule minyaka ngoku uye wacetyiswa ukuba uzilungiselele uvavanyo ngalunye oluphila ngalo, kunye nolokuza uluntu ngokubanzi. Ukuhlanjululwa kwaBantwana boMntwana wam kuya kuqhubeka ngakumbi ngokuba ziinyanga ukuya ngasekupheleni kwalo nyaka kunye nakokuzayo, xa ukubandezeleka koMzimba woNyana wam okunyukayo kuya kusanda. Bantwana bentliziyo yam engenasono, musa ukulibala ukuba kungxamisekile kuwe ukuba uqinise ukholo lwakho, ukhule ngokomoya, uthandaze kwaye ujulise ulwazi lwakho ngomsebenzi woNyana wam: musa ukunikezela kubaFarisi okanye amabala angcwatywayo: bambelela kukholo ngaphandle kokurhoxa. UNyana wam wabelana nawe ngeNdebe yakhe ukuze uthi kunye naye: “hayi ukuthanda kwam kodwa okwakho” (Lk 22:42).
Ndinqwenela ukuba uguqule, ukuze ungalahli ukholo kwaye ungalahlekelwa bubomi banaphakade. Unyana wam ubandezeleka ngenxa yenani lemiphefumlo ebhekisa enzonzobileni, igutyungelwe likratshi, ukungathobeli kunye nokungathobeki.
Bantwana bentliziyo yam engenasono, ndiyakumema ukuba uthandaze: iBandla loNyana wam liyasokola, kwaye njengezimvu ezingenamalusi, niyabhideka.
Bantwana bentliziyo yam engaqhelekanga, ndiyakumema ukuba nithandaze, umhlaba uya kugungqiswa ngamandla kazibuthe omzimba wezulu.
Bantwana beNtliziyo yam eNgenasiphelo, ndiyakumema ukuba nithandaze ngentliziyo yenu, nicamngce ngoThando oluTyhilelweyo ngani, nicamngca ngoThando lwam ngamnye wam othandwayo nguBathathu Emnye Ongcwele.
Musani ukoyika, bantwana, musani ukoyika, yindawo yokufihlalisa abangaziyo ukuba bayaphi, bangqine kuThando lo Nyana wam, bahambisane nezicelo zoMntwana wam, bafumane amandla kwiVangeli, kuMzimba naseGazi laM Nyana, wamamkela elungiswe ngokufanelekileyo.
Musani ukoyika, bantwana bam, niyowazi uMangaliso omkhulu; Uza kubona iziphumo zokholo oluzalisekileyo eSan Sebastián de Garabandal,(1) kwabelwane ngeNdawo Yam Engcwele eFatima, iNdawo Yam Engcwele yaseGuadalupe eMexico, eZaragoza kwiNdawo Yam Engcwele ye-Basilica del Pilar kunye nezo ndawo ndenze ukuba ndibekhona kwaye apho ndiqhubeka khona nokuzenza ndibekhona eMhlabeni. Ndicele uNyana wam ukuba asikelele imiphefumlo kwihlabathi jikelele, njengoko uMangaliso Omkhulu uyakuba njalo ukuze abantu baguquke.
Abantwana bam baya kufuna ukuhamba kwezi ndawo zingcwele, nokuba kuya kuba nzima kubo. Abo bayibonayo [iMimangaliso eNkulu] kunye nabayiphila ngokufanelekileyo ngaphakathi kwabo baya kwazi ukuba uThixo uyabakhusela, kwaye uloyiko luya kubashiya aba bantwana bam.
Zigubungeleni ngeyona Gazi lixabisekileyo lo Nyana wam kwaye nilungiselele uXolelo kwiNtliziyo yam eNgenakufa ngenyanga enikezelwe kwiRosary eNgcwele, ngo-Okthobha.
Musani ukoyika, bantwana bam! Yibani ngabafundi abathembekileyo bo Nyana wam, iNtsalela yakhe eNgcwele.
(1) ISan Sebastian de Garabandal
Uthando Olungcwele alugcineli nto ngokwalo: linika yonke into kuthi, abantwana baKho.
Siyayibona indlela, ngokuthandaza kukaMama wethu osikelelekileyo, intando kaThixo iya kuvumela uMmangaliso oMkhulu ukuba ube namava kwiicawa ezahlukeneyo kunye nezo ndawo umama wethu abonakala ngazo ngoku kwaye ziyinyani. Amen.
← UGisella Cardia - Abefundisi: Thetha…
Virginie - Uloyiso kunye… →